Kulan looga hadlayo Daryeelka dadka Barakacayaasha ah oo ka dhacay Qardho – SBC
Kulan looga hadlayo Daryeelka dadka Barakacayaasha ah oo ka dhacay Qardho
Kulankan aya waxaa uu ahaa mid ku aadanaa daryeelka iyo xuquuqaha Barakacaasha ku dhaqan Deegaanka, Waxaana lagu qabtay Howlka shirarka ee Hotel Al aamin ee magaalada Qardho xarunta gobolka Karkaar.
Waxaa kulankaani goob noog ahaa qeybaha kala duwan ee bulshada, Maamulka iyo ubno ka kala socday Ururada Maxaliga ah, iyo soo qaban qaabiye yaashii kulanka sida Xubno ka socday Ururka Xuquuqul Insaanka Puntland oo marka Magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan PHRA, Hay’ada maalgelinesa ee Oxfam.
Hadalo kala duwan ayaa laga soo kala jeediyay Kulanka waxaana xubnihii halkaasi ka hadlay ka mid ahaa Gudoomiyaha Ururka Xuquuqul insaanka Puntland Mr C/xakim Siciid Maxamed, waxaanu ka hadlay arimo badan oo ku aadan waxa ay uga gol leeyihiin kulankan lagu soo qaadayo xuquuqda dadka Barakacayaasha ah.
Sidoo kale saraakiil ka tirsan Dowlada gaar ahaan Agaasimaha Arimaha bulshada ee Degmada Qardho Maxamed Tuure waxaana uu ka hadlay doorka dowlada kaga aadan daryeelka iyo Dhowrista Xuquuqda dadka barakacayaasha ah, waxaanu halkaasi ka balanqaaday in maamul gobol iyo mid degmoba Puntland ay diyaar u tahay Gacan ka geysiga Dowrista Xuquuqda dadka Barakacayaasha ah.
Sikastaba ha ahaatee Gaba gabadii waxaa iyana dhankooda Culimada Qardho u hadlay Sheeq Buux Maxamed Faarax isagoona taabtay arimo badan oo ku aadan Daryeelka iyo dhowrista Xuquuqda dadka iyo diinta Islaamka sida ay ugu weyn tahay walaal tinimada iyo is dhowrista .
Ugu damebyntii kulankan oo 1 maalin ahaa ayaa ku soo dhamaatay si wanaagsan islamarkaana ay ku dheehantahay is afgarad .